I-LuckyMetrics: Ukulandelela Ukusebenza Kokusesha okukhokhelwayo okulula | Martech Zone
ULwesibili, May 28, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Isilinganiso sakho analytics iphakethe lingahle likucindezele uma uzama nje ukuqapha ukusebenza kwakho kosesho olukhokhelwayo nolubambisene. LuckyMetrics kuyinto analytics ipulatifomu ehlangana ne-Google Adwords, Izikhangiso ze-Bing, i-Clickbank, i-AWeber, i-Mailchimp ne-PayPal ukukunikeza amamethrikhi owadingayo ukuqapha nokwandisa usesho lwakho olukhokhelwayo nokusebenza kokukhangisa okuhambisanayo.
Yiziphi izifunda ezindawo ezinenzuzo?
Yimaphi amahora osuku? Yiziphi izinsuku zesonto?
Imaphi amagama angukhiye okufanele uyeke ukuwabhida, okufanele unyuse ibhidi lakho kuwo?
Qaphela: Sifake isixhumanisi sethu sokusebenzisana kweLuckyMetrics kulokhu okuthunyelwe.
Yini Okufanele Ukwazi Ngokungena Ngemphakathi